बिहान आलस्य महसुस हुन्छ ? यो योगासनले गर्न सक्छ फाइदा – korea pati
September 16, 2020 Korea patiLeaveaComment on बिहान आलस्य महसुस हुन्छ ? यो योगासनले गर्न सक्छ फाइदा
योग गुरुहरू हरेक दिन मर्जर्यासन र बिटिलासनमा योग गर्न सुझाव दिन्छन् । यो आसन गाई गोरु जस्ता चौपायाको जस्तो आकारको हुन्छ । यो आसन अनुसार घुँडाबाट मुनिको भागलाई सिधा जमिनमा सुताउने गरिन्छ । घुँडाले जमिनमा टेकेर अगाडि हातले जमिनमा टेक्ने गरिन्छ ।
यस्तो गर्दा घाँटीदेखि कम्मरसम्मको भाग एउटै तहमा हुन्छ भने हात र घुँडाले जमिनमा छोएको हुन्छ । टाउकोलाई केही माथि उठाएर राख्ने गरिन्छ । यही आसन नै मर्जर्यासन हो ।